Waa maxay dheefta waxtarka leh: waa maxay iyo sida loo xisaabiyo | Maaliyadda Dhaqaalaha
Casudi casals | 03/08/2021 09:00 | Dhaqaalaha guud
Waxay badanaa dhacdaa in iyadoo leh sharciyo badan, tirooyin iyo shuruudo aynaan si buuxda ugu caddayn fikradaha qaarkood ama hawlgallada suurtogalnimada qaarkood. Tani waxay noqon kartaa kiiska gunnada shaqo la'aanta. Waa maxay dheefta waxtarka leh? Xaq ma u leeyahay? Sidee loo xisaabiyaa?
Dhab ahaantii, markaan tixraacno gunnada shaqo la'aanta ee ku darsata, waxaan ka hadlaynaa ururinta shaqo la'aanta. Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa sida saxda ah, cidda la siinayo, sida loo xisaabiyo iyo waxa ay ku kala duwan yihiin lacagta shaqo la'aanta. Waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhriska si aad wax badan uga ogaato mawduuca.
1 Waa maxay lacagta shaqo la’aantu?
2 Waa maxay farqiga u dhexeeya kaalmada tabarucaadka iyo lacagta shaqo la'aanta?
2.1 Intee ayaa laga qaadaa kabidda?
3 Intee la'eg yahay kaalmada waxtarka leh?
3.1 Ilmo ku tiirsan
3.2 Xadka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee dheefta waxtarka leh
Waa maxay lacagta shaqo la’aantu?
Markaan ka hadlayno macaashka wax -ku -biirinta, waxaan tixraacnaa macaashkaas oo uu qofku helo ka dib markii uu ugu yaraan ku tabarucay sidii shaqaale ahaan Lambarka Bulshada. PSi aad u hesho, xiriirka shaqaalaynta ee ka dhexeeya qofka laga hadlayo iyo shirkadda waa inuu dhammaaday. Sidaa darteed, haddii aan rabno inaan qaadno macaashka tabarucaadka, oo sidoo kale loo yaqaan shaqo la'aanta, waa in nalaga saaraa Lambarka Bulshada annagoo ah shaqaale firfircoon.
Gunnada shaqo la'aanta ee ku darsata la siiyo oo keliya kuwa buuxiya shuruudaha qaarkood in aan hoos ku taxno:
Inaad naftaada ku hesho xaalad shaqo la aan sharci
Xigasho waqtiga ugu yar ee Lambarka Bulshada.
Waxay dabooleen muddo ugu yaraan 12 bilood 6 -dii sano ee ka horreysay shaqo la'aanta sharciga ah.
Aan gaarin da'da hawlgabka.
Ku jooji xiriirka shaqaalaynta joojinta qandaraaska, ERE ama eriga.
Dhammaan wixii ku saabsan lacagta shaqo la'aanta
Sidii aan hore ugu soo sheegnay mid ka mid ah qodobadii hore, si aan ugu qalmo lacagta shaqola'aanta waa in aan ku biirinnay Lambarka Bulshada ugu yaraan hal sano, taas oo ah, 360 maalmood oo sax ah. Wakhtigan waxaan haysanaa afar bilood oo gunno ah, Waxaan ula jeedaa 120 maalmood. Hadda laga bilaabo waxaan shaqo -helidda heli doonnaa laba bilood oo dheeraad ah lixdii bilood ee dheeraadka ah ee tabarucaadka, illaa aan ka gaarno xadka la aasaasay ee 24 bilood ah. Tani waxay u dhigantaa muddada la soo xigtay ugu yaraan lix bilood.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kaalmada tabarucaadka iyo lacagta shaqo la'aanta?
Marar badan, ereyada “gunnada tabarucaadka” iyo “gunnada shaqo la’aanta” ayaa wareersan. Hadda oo aan ogaannay waxa ay tahay kaalmada wax -ku -oolka ah, waxaan sharxi doonnaa waxa ay ka dhigan tahay lacagta shaqola'aanta oo aan sidaas ku dhammaynno aragtida farqiga u dhexeeya labadooda.
Lacagta shaqo la'aanta: waa maxay iyo sida loo codsado
Waa gargaar aan tabarruc ahayn iyo dabeecad gargaar. Waxaa loogu talagalay kuwa aan haysan dakhli ku filan. Waa kiisaska dooran kara lacagta shaqo la'aanta:
Dadka iyagu ha gaarin qiimaha ugu yar si aad u hesho dheefta waxtarka leh.
Dadka mar hore si buuxda u isticmaalay dheeftiisii ​​iyo weli ma heli karaan shaqo.
Ka weyn 55 sano jir kuwaas oo bilaa shaqo ah.
Muhaajiriinta ku laabanaya Spain, ilaa inta dalalkooda aysan lahayn heshiisyo laba geesood ah oo ku saabsan shaqo la’aanta.
Maxaabiista la sii daayay oo ku xukumay ugu yaraan lix bilood.
Dadka naafada ah ilaa heer naafonimo qayb ahaan joogto ah oo ay ugu wacan tahay mihnadda caadiga ah, ka dib markii ay soo mareen naafo joogto ah.
Iyadoo ku xiran duruufaha, shuruudahaan waa in sidoo kale la buuxiyaa:
Dadka ku tiirsan, muddada tabaruca ugu yar waa saddex bilood.
La'aanta ku tiirsaneyaal, muddada tabaruca ugu yar waa lix bilood.
Dakhligu waa inuusan dhaafin 75% mushaharka ugu yar ee hadda jira.
Intee ayaa laga qaadaa kabidda?
Xaddiga lacagta shaqola'aanta waxaa lagu xisaabiyaa 80% IPREM (Saamaynta Badan ee Tilmaamaya Dakhliga Dadweynaha). Si kastaba ha ahaatee, tan waa la kordhin karaa haddii aan leenahay in ka badan saddex qof oo na mas'uul ah oo ka weyn 45 sano.
Laakiin ilaa goormaan qaadan karnaa lacagta shaqo la'aanta? Muddadii ay jirtay waxay ku xiran tahay tirada bilaha aan soo sheegnay. Haddii ay dhacdo in aan leenahay carruur ku tiirsan, muddada tabaruca ugu yar waa saddex bilood. Saddexdaas bilood waxaan qaadan doonaa lacagta shaqo la'aanta afar ama shan bilood. Haddii aynaan haysan carruur ku tiirsan, muddada ugu yar ee tabarucaaddu waa lix bilood oo waxaannu qaadan doonnaa gunnada muddo lix bilood ah, xataa haddii aannu wax badan ku darsannay.
Intee la'eg yahay kaalmada waxtarka leh?
Si aan u ogaano inta laga qaadayo dheefta waxtarka leh, waa inaan marka hore ogaano saldhigga sharciyeynta. Waa celceliska dhammaan saldhigyada tabarucaadka shaqo la'aanta ee ay lahaayeen 180 maalmood ee la soo dhaafay kahor xaaladda shaqo la'aanta sharciga ah, oo ah in la yidhaahdo, xilligan la joogo oo ay dhammaatay waajibka xigasho. 180 -kii maalmood ee hore ayaa had iyo jeer loo tiriyaa jadwalka waxaana la raacaa midba midka kale. Suurtagal ma aha in lagu daro qaws -ka.
Marka la xisaabinayo saldhigga sharciyeynta ee shaqo la'aanta, celceliska dhammaan mushaharka shaqaalaha lixdii bilood ee la soo dhaafay ayaa la tixgelinayaa. Wakhti -dhaafka kuma jiro xisaabtan. Sidaa darteed, hadba sida ay u badan tahay mushaharka, ayaa saldhigga tabarucaadku sarreeyaa Tani, iyaduna, waxay kordhisaa saldhigga sharciyeed ee macaashka.
Xisaabi saldhigga sharciyeynta
Markaan dhidibno saldhigga sharciyeynta iyadoo loo eegayo celceliska mushaharka ee hadda jira, waa waqtigii la adeegsan lahaa 70% inta lagu jiro 180ka maalmood ee ugu horreeya macaashka si loo ogaado xaddiga aad xaqa u leedahay. Muddadan koowaad ka dib, xaddiga macaashku wuu yaraadaa. Laga bilaabo maalinta 181, 50% ayaa lagu dabaqayaa saldhigga sharciyeynta si loo go'aamiyo xaddiga la helayo.
Sidoo kale, laba nooc oo wax -dhimis ah ayaa khuseeya lacagta guud ee u dhiganta dheefta waxtarka leh:
Waxtarka Lambarka Bulshada: 4,7% saldhigga sharciyeynta. Kani waa celceliska saldhiggii tabarruca ee lixdii bilood ee la soo dhaafay loogu talagalay xaaladaha degdegga ah.
Canshuur celinta dakhliga, inta ay habboon tahay.
Ilmo ku tiirsan
Fikradda "ilmo ku tiirsan" ayaa ahmiyad weyn leh marka ay timaaddo helitaanka macaashka shaqo la'aanta. Tan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in xadka dhaqaalaha, kan ugu sarreeya iyo kan ugu yarba, ee ku saabsan faa'iidooyinka waxay aasaas ahaan ku tiirsan yihiin mas'uuliyadaha qoyska ee dadka laga hadlayo. Laakiin maxaa loola jeedaa ilmo ku tiirsan? Kuwa soo socda ayaa ku jira qaybtaan:
Wiilasha ama gabdhaha da'doodu ka yar tahay 26 sano.
Wiilasha ama gabdhaha ka weyn 26 sano ee naafada ah oo ka badan 33%.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la muujiyo ku tiirsanaantooda dhaqaale. Si wiilasha ama gabdhaha loogu tixgeliyo mas'uul, Waa inaysan lahayn dakhli u dhigma ama ka weyn 100% mushaharka ugu yar ee xirfadda (SMI), marka laga reebo la noolaanshaha qofka danaynaya ururinta dheefta waxtarka leh.
Wada noolaanshaha, bixinta hawlgabka waxaa lagu milmay xagga cuntada, xataa haddii carruurtu la nool yihiin waalidka kale. Xaaladahan oo kale fikradda ilmuhu waxay ku fidsan tahay tan xaaska / sayga. Mararka qaar, agoonta labada waalidba waxaa loo aqoonsan karaa inay yihiin carruur ku tiirsan marba haddii ay ku tiirsan yihiin ka -faa'iideystayaasha.
Xadka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee dheefta waxtarka leh
Markaan xisaabinno lacagta u dhiganta lacagta shaqola'aanta ee ku -biirinta ah, waa inay ku xirnaataa ugu badnaan iyo xadka ugu yar oo ku xiran duruufaha qoyska codsadaha. Ujeeddada koofiyadan waa taas xaddiga gunnadani waxay la mid tahay mushaharka dhexe iyo kan sare labadaba.
Dadka aan lahayn carruur ku tiirsan, xadka ugu sarreeya ee macaashka wax -ku -oolka ah wuxuu u dhigmaa 175% bishii Tilmaamaha Dakhliga Saameynta Badan ee Dadweynaha (IPREM) wuxuu kordhay lix meelood meel, taasoo u dhiganta € 2020 sanadka 537,84. Sidan, natiijadu waxay u dhigantaa € 1.098,09 sanadka 2020.
Taa bedelkeeda, codsadayaasha leh carruur ku tiirsan waxay leeyihiin dabool kale oo ugu sarreeya. Tani waxay u dhigantaa 200% bishiiba Tusiyaha Dakhliga Saamaynta Badan ee Dadweynaha (IPREM) lagu kordhiyay lix meelood meel haddii uu yahay ilmo keli ah, oo u dhiganta € 1.254,96 2020 sanadka XNUMX. Marka la eego laba carruur ama ka badan, daboolka waxaa loo kordhiyaa 225% bishii Tusaha Dakhliga Saamaynta Badan ee Dadweynaha (IPREM) ayaa kordhay lix meelood hal. Kiiskan ugu dambeeyay wuxuu u dhigmi doonaa wadar ahaan € 1.411,83 sanadka 2020.
Si looga hortago in dadka qaar helaan faa'iidooyin aad u liita, sidoo kale waxaa jira koofiyado ugu yar. Xaaladahan, xaddiga ugu yar ayaa la go'aamiyaa oo aan ku xirnayn xaddiga tabarucayaasha codsadaha. Sidan, ka -faa'iideystayaasha aan haysan carruur ku tiirsan waxay helaan ugu yaraan 80% bishii Tusaha Dadweynaha ee Dakhliga Saamaynta Badan (IPREM) oo lagu kordhiyay lix meelood hal. Ee 2020 wuxuu ahaa 501,98 Euro. Haddii codsaduhu leeyahay carruur ku tiirsan, waxay heli doonaan 107% bishiiba Tusiyaha Dadweynaha ee Dakhliga Saamaynta Badan (IPREM) oo kordhay lix meelood meel, taasoo dhalisay € 671,40 sanadka 2020.
Gabagabadii, waxaan dhihi karnaa faa'idada shaqo la'aanta ee ku darsatay waa ikhtiyaar wanaagsan dadkaas, ka dib markii ay waqti dheer ku darsadeen kaalmada Lambarka Bulshada, si lama filaan ah isu arkaan shaqo la'aan. Waad ku mahadsan tahay kaalmadan, waxay awoodi doonaan inay naftooda masruufaan muddo ilaa ay ka helaan shaqo cusub. Waxaan rajaynayaa inaan kaa caawiyay inaad si fiican u fahanto sida nidaamkani u shaqeeyo, dhinacyada la tixgeliyo iyo sida loo xisaabiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Waa maxay dheefta waxtarka leh